तीन साथीले पत्नी साटासाट गरेर यौ’न सम्पर्क गरेको भिडियो बनाएपछि.. « Etajakhabar
प्रकाशित मिति : ८ पुष २०७६, मंगलवार १५:२४
प्रहरीले बताएअनुसार कांदिवली पूर्वमा बस्ने आरोपी आफ्नो परिवारसँग बस्दै आएको र उसको १६ वर्ष अघि विवाह भएको थियो। शेयर बजारमा काम गरिरहेका उनका दुई साथीहरू छन्। उनीहरू निजी कम्पनीहरूमा काम गर्छन्। उनकी श्रीमतीले दिएको उजुरीमा उनका पतिले तीन दिन अघि आफ्ना साथीहरूलाई घरमा ल्याएर पतिले दुई साथी र उनकी पत्नी बीच शा’रीरिक स’म्पर्क गरेका थिए । त्यतिमात्र मात्र होइन, उनका पतिले यौ’न सम्पर्क गरिरहेको समयमा भिडियो पनि बनाएका थिए।
यो पनि पढ्नुहोस : कति छ अम्बानीकी छोरीको सम्पत्ति ?
भारतीय अर्बपति तथा रिलायन्स इन्डस्ट्रीका अध्यक्ष मुकेश अम्बानीकी २८ वर्षीया छोरी इशा अम्बानीको गत बर्ष डिसेम्बर १२ मा विवाह भयो । इशा परिमल ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक आनन्द परिमलकी श्रीमती बनिसकेकी छन् । सो भव्य विवाह समारोहमा विभिन्न क्षेत्रहरूको दिग्गज सेलिब्रिटी पुगेका थिए । विवाह मुम्बईको अम्बानीको घर ‘अन्टिटिया’ मा भएको थियो।
कस्तो अचम्म : गोहीले पेटमा ढुंगा बोकेको हुन्छ, जसले जाँतोको काम गर्छ !
५ आश्विन २०७७, सोमबार २३:२२